Mick O’Rourke – Cast – Channel Myanmar
Ransom(1996) Ransom(1996) IMDb...6.6,,,Rotten...76% ဒီကားကိုကြည့်နေတဲ့ ခင်ဗျားဟာ ဇာတ်လမ်းစပြီး မိနစ်(၂၀)လောက်မှာ တစ်ကားလုံးခြုံငုံသုံးသပ်မိသွားပြီ. ..ဘာလို့ဆို စစချင်း အဓိက သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ မဲလ်ဂစ်ဆင်ရဲ့ အကြောင်းကိုစပြတယ်.. သူဟာ လူချမ်းသာတစ်ဦးဖြစ်တယ် ချစ်စရာဇနီးလေးနဲ့ လိမ္မာတဲ့သားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်.. သိပ်မကြာဘူး သူ့ရဲ့သားကိုပြန်ပေးဆွဲတယ်..ပြန်ပေးဆွဲသူက ဒေါ်လာ သန်း(၂၀)နဲ့ကလေးကို လာရွေးဖို့ပြောတယ်... ကလေးကိုပြန်ရွေးဖို့ ရဲတွေနဲ့အလုပ်ရှုတ်ကြတယ်. ..ဒီမှာတင်ခင်ဗျားဟာ သမရိုးကျကားလို့ ဒီကားကို သုံးသပ်မိလိမ့်မယ်.. ..အဲ့အတွေးဟာ နောက်ပိုင်းမှားယွင်းကြောင်းတဖြည်းဖြည်းပြသွားလိမ့်မယ်.. .ဒါရိုက်တာဟာ ခင်ဗျားမမျှော်လင့်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ခင်ဗျားမမြင်မိ မတွေးမိ တဲ့ ရှုထောင့်တွေကို တစ်စစီဆွဲထုတ်ပြလိမ့်မယ်.. . ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့နေရာမှာ ခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..မဲလ်ဂစ်ဆင်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ဖြစ်သင့်လား .. .ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားတို့ကရော သူ့လုပ်ရပ်ကိုထောက်ခံမှာလား. .. ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေကြား ပြောတတ်တဲ့စကားလေးရှိတယ် ဒီကိစ္စက မင်းထင်သလောက်မရိုးရှင်းဘူးကွဆိုတဲ့စကားကို ဒီမှာလည်း ယူသုံးရမယ်ထင်တယ် . ..ဒီကားကလည်း ခင်ဗျားတို့ထင်သလောက်မရိုးရှင်းဘူးဗျ.... File Size : (900 MB) and (338 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:01:00 Genre : Action, Crime, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hnin Amy Khine Encoded ...
IMDB: 6.6/10 107,441 votes
The Departed (2006) IMDb (8.5)....Rotten Tomatoes (90%) ဒီနေ့တော့ ရုပ်ရှင် အဟောင်းလေး တစ်ကား အကြောင်း ပြောရအောင်။ တော်တော်များများတော့ ကြည့်ဖူးမယ်ထင်ရဲ့။ The Departed (2006) (IMDb Rating 8.5/10) ဆိုတဲ့ကားးပါ။ မူရင်းက ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင် ၂ ကားတွဲ Infernal Affair (2002) (IMDb Rating 8.1/10) ဆိုတာပါ။ ဒါကို ဟောလိဝုဒ်က တစ်ကားထဲဖြစ်အောင် သူတို့ နိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ညှိပြီး ရိုက်ယူထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တိုင်း ဆန် တယ် လို့ ခံစားရတဲ့ ဟောလိဝုဒ် ကား တိုင်း ကြိုက်မိတာမို့ ကြည့်မိပါတယ်… ပြီးတော့ ပါဝင်တဲ့ မင်းသား ၂ ယောက်လုံးအပြင် ဇာတ်ရံတွေကို နာမည်ကြီး မင်းသားကြီးတွေချည်း သုံးထားတာကလည်း ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု တစ်ခုပါ။ ကျနော် ပထမ တစ်ကြိမ် ကြည့်တုန်းက Leonado Dicaprio ထက် ...
It Comes at Night (2017) ဒီဇတ်လမ်းရဲ့အစနိဒါန်းမှာ ပေါလ်ရဲ့ယောက္ခထီးကြီးဟာ ကူးစက်မြန်တဲ့ကတ်ရေဂါကို ခံစားနေရရင်း သေလုမျှောပါအခြေအနေတစ်ခုမှာရင်ဆိုင်နေရပါတယ် ဒီတော့ ပေါလ်ဟာ ရောဂါမကူးစက်နိုင်ခင် သူ့ယောက္ခမကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်.... အဲဒီနောက်မှာ ထူးဆန်းတာတစ်ခုက အဲဒီညမှာပဲ ပေါလ်တို့အိမ်ကို ဝေလ် ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖောက်ဝင်လာပါတယ် ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပေါလ်တို့ဟာထိုလူနဲ့ရင်းနှီးသွားကြပြီး ဝေလ်တို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ပေါလ်တို့မိသားစု အတူတူနေထိုင်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် ဝေလ်တို့မိသားစုရောက်လာတာ သဘောရိုး ဟုတ်ပါရဲ့လား ပေါလ်ကိုလူသတ်မှုနဲ့ဖမ်းချင်လို့ လှည့်ကွက်ဆင်ပြီးလာတာမျိုးလား ပေါလ်သတ်လိုက်တဲ့ အဖိုးကြီးကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သူဟာ မကျွတ်မလွှတ်တဲ့ဘဝနဲ့ လာပြီးခြောက်နေမှာလားဆိုတာ.... ဇတ်လမ်းသွားက ခပ်အီအီတော့နိုင်ပေမယ့် ခြောက်ခြားမှုတွေကိုနှစ်သက်ရင်တော့ ကြည့်ပါစေလို့ တိုက်တွန်းရင်း ဒီမှာတင်ခဏနားလို့ တစ်ခန်းရပ်ပါရစေ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်က စောင်အက်ဖ်အေ ဂျွန်လယောငိပါ) File Size : (700 MB) and (230 MB) Quality : 720pWebdl Running Time : 1hr 31minutes Format : Mp4 Genre : Horror, Mystery Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ...